Shina Fambolena zazakely Fandroana zazakely marevaka Fitiavana any Shina Fambolena sy fanamboarana trano | Gianty
Famoronana Bildika Famboran'ny Boky Faha-jaza marefo mahafinaritra sy mahafinaritra
Ny zaza miloko marevaka sy falifaly sy ny sakafo fihinana zazakely dia tena mampihetsi-po ary maharitra maharitra vita amin'ny fibre voajanahary tsy misy poizina. Azo antoka kokoa noho ny plastika sy ireo fitaovana manimba hafa. Ary ny haingon-trano amin 'ny volotsangana dia manome fahafaham-po ho an'ny ankizy mitazona azy.
Bambo Fiber Set, voajanahary maivana maivana Nahitana sombintsombina fisakafoanana ankizy 5 no mora vazana kelin'ny tanana kely. Ny sotro sy ny vatan-jaza dia malama fa saingy mahazo aina sy ampy tsara mba hahafahan'ny zaza kely mifehy tsara amin'ny famahanana ny tenany.
Ity fantsom-pisakafoanana mahafinaritra ity dia natao manokana ho an'ny ankizy madinika! Ahitana vilia kely iray, kaopy volom-borona, lovia ho an'ny ankizy, sotro sy fork - samy manana pirinty mahafatifaty izy ireo, izay afaka mamporisika ny zanakao hohaniny manokana.
Ny sakafo azo antoka, azo antoka maharitra, Ny sakafonay vita avy amin'ny fibre voajanahary sy voan'ny katsaka voajanahary, izany dia FDA sy BPA maimaimpoana, tsy manimba ary tsy mikorontana. Tsara amin'ny trano, fitsangatsanganana, fety, fitsangatsanganana, trano fisakafoanana, ivelany sy ny maro hafa.
Amin'ny maha-zavamaniry maharitra, ny volotsangana dia manome safidy madio kokoa sy madio kokoa amin'ny famoahana sy famerenana amin'ny laoniny.
Bamboo dia singa voajanahary voajanahary sy voajanahary azo antoka amin'ny singa plastika. Mitombo haingana ny volotsangana ary mameno haingana be amin'ny vidiny haingana, ka tsy ho lany mihitsy ny famatsiana.
Ny BPA dia mijoro amin'ny bisphenol A. BPA dia simika indostrialy izay nampiasaina tamin'ny fanaovana plastika sy vatosoa sasany hatramin'ny taona 1960. Ny fikarohana sasany dia naneho fa ny BPA dia afaka hiondrika anaty sakafo na zava-pisotro amin'ny fitoeran-tsakafo vita amin'ny BPA. Ny fampahafantarana ny BPA dia ahiahy satria mety hisy fiantraikany ara-pahasalamana amin'ny BPA amin'ny atidoha sy ny glande prostate amin'ny zaza, zaza ary zaza. Mety hisy fiantraikany amin'ny fitondran-jaza koa izany. Ny fikarohana fanampiny dia nanolo-kevitra ny mety hiseho eo amin'ny BPA sy ny tosidra.
Ny vokatra iray maimaim-poana BPA dia iray izay tsy mampiasa ny sôkôla voajanahary Bisphenol A amin'ny fananganana azy. Taloha taloha dia maro ny vokatra plastika toy ny tavoahangin-jaza, takelaka plastika ary kofehy, fitoeram-bokatra fitahirizana sy tavoahangy fisotro no namboarina tamin'ny fampiasana BPA.
Item Famoronana Bildika Famboran'ny Boky Faha-jaza marefo mahafinaritra sy mahafinaritra
Content lovia, vilia, kaopy, sotro, sotro
Fanamboarana lamba Tariby volotsangana
Size 42 * 27 * 7.5cm
Isan'ny carton 6 fonosana
Haben'ny baoritra 50 * 43 * 29cm
Previous: Boaty fivarotana kapoakan-tsakafo CPLA miaraka amina boaty famafazana fampisehoana
Manaraka: Compostable CPLA Reusable Takelaka azo ampiasaina miaraka
Azo ampiasaina ny kofehy azo ampiasaina
Azo alaina kitapom-bolam-bokatra azo soloina
Azo ampiasaina ny cpla Cutlery
Ny takelaka Cpla azo ampiasaina indray
Fanavaozana plastika tsy miorina amin'ny plastika vita amin'ny CPLA ...
CPLA Cutlery azo averina tsy misy plastika maimaimpoana ...
Compostable CPLA Reusable Takelaka azo ampiasaina miaraka